नेपाली मेला सबैको हो, आइदिनुहोस्, सफल बनाइदिनुहोस् : संयोजक हरि गुरुङ | Everest Times UK
‘हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान, हाम्रो गौरव’ भन्ने मूल सन्देशसहित २९ अगस्टमा बेलायतमा १२ औं नेपाली मेला हुँदैछ । तमु धिं यूकेको आयोजनामा सन् २००९ देखि निरन्तर रुपमा सञ्‍चालन हुँदै आएको नेपाली मेला गत वर्ष भने कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण हुनसकेन । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले आफ्नो मौलिक संस्कृति संरक्षण र पहिचानका लागि टेवा पुर्‍याउँदै आएको नेपालीको मेलाको तयारी लगायत विषयमा तमुधिं यूकेका उपाध्यक्ष एवं मेला संयोजक हरि गुरुङसँग मिलन तमुले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
बाह्रौं नेपाली मेला हुने केही दिनमात्रै बाँकी । यसको तयारी कस्तो हुँदैछ ?
बेलायत सरकारले कोभिडका कारण लगाइएको निषेधहरु हटाउने जुनमा निर्णय गरिसकेपछि हामीले पनि नियमित रुपमा हुँदै आएको गोर्खा कप, नेपाली मेलाजस्ता कार्यक्रमको तयारी सुरु गर्‍यौं । यस पटकको १२ औं संस्करणको नेपाली मेला हो । गत वर्ष कोरोना लगायतका कारण हुन सकेन । यस वर्षको नेपाली मेलाको संयोजन गर्न तमु धिं यूकेका आदरणीय अध्यक्ष हित काजी गुरुङज्यूले खटाउनुभएकोले म मे महिनाको सुरुदेखि नै लागेको थिएँ । त्यस समयदेखि नै चिठी पत्रहरु ड्राफ्ट गर्ने, पठाउन थालेपछि नै नेपाली मेलाको तयारी सुरु भयो । त्यसपछि हामीले सधैं गर्ने गरेको गोर्खा कप मे मा हुनुपर्नेमा जुलाईमा हुन गयो । त्यसले गर्दा गोर्खा कपको तयारीमा पनि लागियो । तर समानान्तर रुपमा नेपाली मेलाको तयारी पनि मैले गर्दै थिएँ । विभिन्‍न संस्थाहरुलाई चिठी पत्र पठाउने, उहाँहरुबाट प्रतिक्रिया लिने आदि कामहरु लगातार भइरहेको थियो । नेपाली मेलाका अरु पक्षहरुमा पनि मैले पहल गर्दै थिए । भाग्यवश यो वर्ष सबै किसिमका रेस्ट्रिक्सनहरु लिभ भएको छ । हामी पूर्ण तयारीमा छौं । लगभग २० वटा विभिन्‍न नेपाली संस्थाहरुले हामीलाई सहभागी हुन्छौं भनेर कन्फमेसन दिइसक्नु भएको छ ।
हामी रेडी छौं । क्याम्पर्टन पार्क रेसकोर्स । हजुरहरुको स्वागत गर्नका लागि रेडी छौं । यो मेला २९ अगस्ट आइतबारको दिनमा छ । यसबारेमा अध्यक्ष हित काजी गुरुङज्यूको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल नेपाली दूतावास लन्डनमा गएका थियौं । उहाँहरुबाट पनि हामीलाई पूर्ण सहयोग हुने आश्वासन मिलेको छ । सहयोग पनि गर्नुभएको छ । त्यसकारण महामहिमज्यू र राजदूतावासका सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसरी मेलाको संयोजन गर्ने जिम्मा दिनुभएकोमा आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
हो, नेपाली मेला तमुधिं यूकेले संयोजन गर्छ । तर पनि यो तमुहरुको मात्रै मेला होइन । सम्पूर्ण नेपालीहरुको मेला हो । तपाईं हाम्रा सहभागिता बिना यो सफल हुँदैन । त्यसकारण २९ तारिख अगस्ट दिन यहाँहरुको आगमनको लागि पर्खाइमा रहनेछौं । पाल्नु होला । रमाइलो गर्नु होला । हाम्रो संस्कार, संस्कृति, पहिचान सबैलाई जोगाइराख्नु पर्छ । तपाईं हाम्रो जिम्मा हो । हामी तयार छौं, हजुरहरु केबल आइदिनु मात्रै पर्‍यो । सम्पूर्ण नेपालीजनहरु र उहाँहरुका अन्य विदेशी मित्रहरु हुनुहुन्छ भने पनि हामी तपाईंलाई चुल्हो निम्तो गर्दछौं । पाल्दिनु होला र नेपालको संस्कार, संस्कृतिमा टेवा पुग्ने काम गरिदिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु ।
कोरोना महामारीको त्रास अझै सकिएको छैन । पहिले पहिले वर्षझैं नेपाली मेलाको रौनक आउँदैन कि ?
अहिले अलिकति फरक, भिन्न र असहज परिस्थिति अवश्य हो । पहिले पहिले हामीले गोर्खा कप गरिसकेपछि नेपाली मेलाको तयारीका लागि प्रशस्तै समय पाउँथ्यौं । तर यसपालि परिस्थितिजन्य कारणले गर्दाखेरी हामीलाई सहज छैन । र पनि नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरु, तमुधिं यूकेका आदरणीय कार्यसमिति, ट्रस्टीज्यूहरु, सल्लाहकारज्यूहरु र सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरु साथै नेपाली मेलालाई सफल बनाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत हुनुहुने आदरणीय मित्रहरुको सहयोगबाट सफल हुनेछौं भन्नेमा हामी ढुक्क छौं । सबै किसिमको तयारी भइसकेको छ । केवल त्यो दिन आउन बाँकी छ । र हजुरहरु आउनु बाँकी छ ।
मैले भन्न खोजेको जनमानसमा अझै कोभिडको डर छ, त्यसले असर गर्दैन र ?
जनमानसमा पूर्ण रुपमा कन्फिडेन्सियल आइसकेको छैन । तर पनि म यहाँहरुलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने कृपया, आउनुभन्दा एक/दुई दिन अगाडि होम किटबाट पीसीआर चेक गर्नुहोस् । र मेलामा आइसकेपछि कार्यक्रम स्थलमा हामीले सीमित मात्रमा माक्स वितरण गर्न राख्ने छौं । र स्यानीटाइजर जेल पनि त्यहाँ उपलब्ध हुनेछ । अलि कति भएको शंकालाई पनि निवारण गर्नका लागि यो व्यवस्था गरेका छौं । त्यसकारण तपाईंहरु निर्धक्कसाथ आउनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
मेलाको आकर्षण र विशेषता के के छ भनिदिनुहोस् न ?
मेला सधैंका वर्षहरुजस्तै हो । हाम्रा विभिन्‍न जातीय संघ संस्थाहरुले आफ्नो जातीय पहिचान बोकेर त्यहाँ आउनुहुन्छ । एक हिसाबले भन्नुपर्दा नेपालभरिका फूलहरु टिपेर केम्पर्टन पार्कमा छर्न बसेका छौं । त्यो छरिन्छ । जातीय संस्थाहरुले विविध किसिमका झाँकीहरु त्यहाँ देखाउनुहुनेछ । आफ्नो मौलिकता देखाउनुहुनेछ । त्यस्तै तरिकाले नानीहरुले मौलिक नृत्यहरु प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । युवा भाइबहिनीहरुले आफ्ना आधुनिक किसिमका प्रस्तुतिहरु पनि दिनुहुन्छ । विभिन्‍न किसिमका व्यापरिक स्टलहरु छन् । तपाईंहरु आउन सक्नुहुन्छ । चाहेको सामग्री खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । र, हामीकहाँ विभिन्‍न किसिमका भोजनका लागि रेस्टुरेन्टहरु पनि आउँदैछन् । मन परेको चिज किनेर खान पनि सक्नुहुन्छ ।
प्रवेश शुल्कको व्यवस्था के छ ?
पहिलेको जस्तै शुल्कको व्यवस्था गरेका छौं । ५ पाउन्ड प्रतिव्यक्ति हो । भ्यान अथवा ठूलो बस ल्याउनुहुन्छ भने यहाँहरुलाई फाइदा छ । त्यसको १० पाउन्ड लाग्छ । सकेसम्म भ्यान वा बसमा आउन यहाँहरुलाई म अनुरोध गर्छु । झाँकीमा आउने आदरणीय संघसंस्थाका अध्यक्षज्यूहरुलाई भनेको छु, यहाँहरु आउनुहोस्, सहभागिता जनाइदिनुहोस् । अहिलेको विषम परिस्थितिमा यस्तै होला भन्‍न सकिँदैन । तर तमुधिं यूकेले दु:ख गरेको ठाउँमा मुनाफा निस्केछ भने हामी सधैंझैं बाँड्ने नै छौं । आफ्नो गोजीबाट दिन सक्ने अवस्था त अहिले छैन । र पनि हामीले त्यतिखेर नै विचार गर्नेछौं । यहाँहरुले पहिले सहभागिता देखाउनुपर्‍यो ।
अन्तमा छुटेका केही विषय छन् कि ?
नेपाली मेला सबै नेपालीको मेला हो । आइदिनुहोस् । सहभागिता जनाइदिनुहोस् । अघिल्ला वर्षहरुदेखि भेट्न नपाएका इस्टमित्रहरुलाई भेट्नुहोस् । रमाइलो साटासाट गर्नुहोस् । माया साटासाट गर्नुहोस् । नेपाली मेलालाई सफल बनाइदिनुहोस् ।
जनताले मेरो काम देखेका छन्, त्यसैले चुनाव जित्ने विश्वास छ : ठूलोकान्छा तामाङ
नयाँ पुस्तालाई कांग्रेसमा कसरी समावेश गराउने भन्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो : तामाङ